Get Free foto mmetụta Software na Mepụta Ịtụnanya Slideshows
> Resource> Atụmatụ> Nweta Best foto mmetụta Software na Mepụta Ịtụnanya Slideshows
Photoshop bụ uru owning ma ọ bụrụ na ị na-agbakwunye karịa nnọọ mfe foto mmetụta. Ma, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị, e nwere bụ PhotoFiltre, ndị kasị mma free foto mmetụta software.
Lee Ọzọkwa: Free Online foto mmetụta
Best foto mmetụta Software
Ebe a bụ nseta ihuenyo nke PhotoFiltre. Dị ka ị pụrụ ịhụ, o nwere Photoshop ịke interface ma na-eme ka ọ dịkwuo mfe itinye foto mmetụta gị oyiyi. PhotoFiltre bụ uru karịa Photoshop site gụnyere bara uru ngwá ọrụ dị ka ogbe Ntụgharị, akara ngosi ekspootu, image Explorer, wdg
Photo Mmetụta ngosi mmịfe Software maka Mac
Ugbu a, ọ bụrụ na ị chọrọ ka a ngosi mmịfe na ezi-na-achọ foto mmetụta, ọ dịghị mkpa na ịchọta foto ọzọ mmetụta software. I nwere ike mgbe niile dezie foto gị na wuru na-foto nzacha. Na-ewere Fantashow maka Mac ka ihe atụ, ọ na-abịa na ihe karịrị 15 foto mmetụta aka gị photos ke kiet ke otu click, gụnyere Black na White, Sepia, na-ezighị ezi, Katuunu, Vignette, Hot Wave, na na.
Ọzọkwa, ọnọ ọmarịcha ekwekọghị n'ezie tinye ihe mmetụta gị foto na ihe ngosi mmịfe, dị ka ndị a:
Photo Mmetụta ngosi mmịfe Software maka Windows
DVD ngosi mmịfe Nrụpụta bụ Windows Ẹkot version ka Fantashow, nke nwekwara n'ozuzu foto mmetụta maka ngosi mmịfe photos. Gịnị kwesịrị ịbụ aha bụ na ọ nwere ihe ekwekọghị karịa Fantashow ike na fim ndị nkecha foto mmetụta.